နောက်ဆုံး(၆)ပွဲရလဒ်ကို ထည့်တွက်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဇယားကို စိတ်ကူးကြည့်မယ်
နောက်ဆုံး(၆)ပွဲကိုသာ ထည့်တွက်ရင် ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေ ဘယ်အဆင့်မှာ ရပ်တည်ကြမလဲ
28 Nov 2018 . 5:54 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲ စတင်တာ အခုဆိုရင် ပွဲစဉ်(၁၃)ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ လက်ရှိအချိန်မှာ အမှတ်ပေးဇယားကို မန်စီးတီးအသင်းက ဦးဆောင်နေပြီး လီဗာပူးလ်အသင်းက နောက်ကနေ ဖိအားလိုက်ပေးနေတယ်။ ထူးထူးခြားခြားတစ်ခု စဉ်းစားမိတာပါ။ တကယ်လို့ ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး(၆)ပွဲ ရလဒ်ကိုသာ ထည့်တွက်ပြီး အမှတ်ပေးဇယား ရပ်တည်မှုကို ကြည့်ရင် ဘာတွေများ ပြောင်းလဲသွားမလဲ။ တစ်ချက်လာက် ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
Won5| Drawn 1 | Lost0| Points 16
W5| D0| L 1 | Points 15
W4| D2| L0| Points 14
W4| D 1 | L 1 | Points 13
W3| D3| L0| Points 12
W3| D2| L 1 | Points 11
W3| D 1 | L2| Points 10
W2| D2| L2| Points 8
နောက်ဆုံး(၆)ပွဲရလဒ်ကိုပဲ ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်လည်း မန်စီးတီးအသင်းက အမှတ်ပေးဇယားကို ဆက်ဦးဆောင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စပါးအသင်းက အဆင့်(၂)နေရာကို တက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အခုအဆင့်(၄)နေရာမှာရှိနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက အဆင့် (၆)အထိ ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက အမှတ်ပေးဇယားအဆင့် (၁၃)မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ နယူးကာဆယ်အသင်းက အဆင့်(၈)နေရာအထိ တက်လှမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တန်းဆင်းဇုန်ထဲမှာ ဘယ်လိုရှိနေမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် . .
W 1 | D0| L5| Points 3
W0| D2| L4| Points 2
အမှန်တကယ်ရပ်တည်မှုအရ ဆောက်သမ်တန် (၁၈)၊ ကာဒစ်ဖ် (၁၉)၊ ဖူလ်ဟမ် (၂၀)တို့ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး(၆)ပွဲရလဒ်နဲ့ ရပ်တည်မှုကို ကြည့်ရင်တော့ ဖူလ်ဟမ်က အဆင့်(၁၈)၊ ပဲလေ့စ်က (၁၉)၊ ဘန်လေက အဆင့်(၂၀)နေရာမှာရှိနေတယ်။ ဒါကတော့ စိတ်ကူးသက်သက်နဲ့ အပျော်သဘော ခန့်မှန်းကြည့်တာပါ။ သေချာတာကတော့ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးကို မန်စီးတီးအသင်းက စိုးမိုးထားဦးမယ်ဆိုတာပါပဲ . .
Photo:Evening Standard,Football.London,Getty Images
နောကျဆုံး(၆)ပှဲကိုသာ ထညျ့တှကျရငျ ပရီးမီးယားလိဂျအသငျးတှေ ဘယျအဆငျ့မှာ ရပျတညျကွမလဲ
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲ စတငျတာ အခုဆိုရငျ ပှဲစဉျ(၁၃)ပွီးဆုံးသှားပါပွီ။ လကျရှိအခြိနျမှာ အမှတျပေးဇယားကို မနျစီးတီးအသငျးက ဦးဆောငျနပွေီး လီဗာပူးလျအသငျးက နောကျကနေ ဖိအားလိုကျပေးနတေယျ။ ထူးထူးခွားခွားတဈခု စဉျးစားမိတာပါ။ တကယျလို့ ပရီးမီးယားလိဂျ နောကျဆုံး(၆)ပှဲ ရလဒျကိုသာ ထညျ့တှကျပွီး အမှတျပေးဇယား ရပျတညျမှုကို ကွညျ့ရငျ ဘာတှမြေား ပွောငျးလဲသှားမလဲ။ တဈခကျြလာကျ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .
နောကျဆုံး(၆)ပှဲရလဒျကိုပဲ ထညျ့တှကျမယျဆိုရငျလညျး မနျစီးတီးအသငျးက အမှတျပေးဇယားကို ဆကျဦးဆောငျမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ စပါးအသငျးက အဆငျ့(၂)နရောကို တကျလှမျးနိုငျမှာဖွဈပွီး အခုအဆငျ့(၄)နရောမှာရှိနတေဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးက အဆငျ့ (၆)အထိ ကဆြငျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ထူးခွားတာတဈခုက အမှတျပေးဇယားအဆငျ့ (၁၃)မှာ ရပျတညျနတေဲ့ နယူးကာဆယျအသငျးက အဆငျ့(၈)နရောအထိ တကျလှမျးနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။ တနျးဆငျးဇုနျထဲမှာ ဘယျလိုရှိနမေလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . .
အမှနျတကယျရပျတညျမှုအရ ဆောကျသမျတနျ (၁၈)၊ ကာဒဈဖျ (၁၉)၊ ဖူလျဟမျ (၂၀)တို့ဖွဈပွီး နောကျဆုံး(၆)ပှဲရလဒျနဲ့ ရပျတညျမှုကို ကွညျ့ရငျတော့ ဖူလျဟမျက အဆငျ့(၁၈)၊ ပဲလစျေ့က (၁၉)၊ ဘနျလကေ အဆငျ့(၂၀)နရောမှာရှိနတေယျ။ ဒါကတော့ စိတျကူးသကျသကျနဲ့ အပြျောသဘော ခနျ့မှနျးကွညျ့တာပါ။ သခြောတာကတော့ အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးကို မနျစီးတီးအသငျးက စိုးမိုးထားဦးမယျဆိုတာပါပဲ . .